Faritra Vakinankaratra - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Vakinankaratra)
Distrika Miisa 7
Lehiben'ny faritra Andriamasimanana Samuel Bertin
Velarantany 16 599 km2
Isam-ponina 1 803 307 mpo.
Hakitroky ny mponina 108,64 mpo/km2
Ny Faritra Vakinankaratra dia anisan' ny faritra roa ambin' ny roapolo an' i Madagasikara. Any atsimon' ny Faritanin' Antananarivo no misy azy, eo anivon' ny Nosy. Ny renivohiny dia Antsirabe.
Ny fanjakana Vakinankaratra, fantatra amin' ny anarana hoe ny Fanjakan' Andrantsay dia voaforon' Andrianony tamin' ny fanombohan' ny taonjato faha-17, Andrantsay dia andriana avy any Alasora, any atsimon' Antananarivo. Nandritry ny ela, ny fanjakan' Andrantsay dia any Fivavahana, any amin' ny faritanin' i Betafo. Ny anara-mponina nentiny tamin' izany fotoana izany dia "Betsileo", anarana ho entin' ny mifanila aminy any atsimo. Ny tampon-tanjaky ny Fanjakan' Andrantsay dia mety tany amin' ny taonjato faha-18 tany ho any. Ny fianjadiany dia nivelatra hatrany Menabe Sakalava, nihetsika noho ny fihetsehan' ny andriany ny mponina. Ny mpanjaka lehibe an' Andrantsay dia Andriamanalinarivo, teo an-tseza tamin' Andrianampoinimerina, miaraka amin' ny andriana Radama nanomboka ny ady tamin' ny fanombohan' ny taonjato faha-19. Hatrizay, ao amin' ny Fanjakana merina ny fanjakan' Andrantsay, ary Vakinankaratra no anarany vaovao. Isan' Imerina enin-toko izy nanomboka tamin' Andrianampoinimerina (1787-1810), ka ny fizaràna dimy hafa Avaradrano, i Vakinisisaony, i Marovatana, Ambodirano, ary i Vonizongo.
Tamin' ny andron' ny fanjanahantany, nafindra tany Antsirabe ny renilaka, lasa tanàna manan-danja fantatra amin' ny hatsiaka ny toe-taniny sy ny toetran' ny ranony.
Ny faritra Vakinankaratra dia voazara kaominina 26 sy distrika enina :
((fr)) Sehatra ofisialy Archived Jiona 15, 2009 at the Wayback Machine
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Faritra_Vakinankaratra&oldid=1044859"
Voaova farany tamin'ny 13 Mey 2022 amin'ny 04:55 ity pejy ity.